vendredi, 21 juin 2019 15:16
Fahasalamam-bahoaka: Mila mailo amin’ny fanapoizinana ara-tsakafo
Manentana ny rehetra ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka hitandro mandrakariva ny fahadiovan'ny tanana, ny fitaovana fikarakarana sakafo, ny fomba fitehirizana sy fikirakirana ny vokatra toy ny "mayonnaise », « fruits de mer »... ho fisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo sy hitsinjovana ny Fahasalamam-bahoaka amin’izao ankatoky ny Asaramanitra izao. Voakasik’io fanentanana io ireo orinasa mpamokatra, ny isan-tokantrano, ny mpikarakara lanonana, ny mpivatotra hani-masaka (Gargote). Ho hentitra ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny fanaraha-maso ny kalitao.
vendredi, 21 juin 2019 15:12
Fankalazana ny fetim-pirenena: Efa vonona ny podium eo Analakely
vendredi, 21 juin 2019 14:33
Fetim-pirenena: Hisy miaramila vahiny hanao Matso eny Mahamasina
Hiavaka ny fankalazana ny tsingerintaona faha-59 taonan’ny niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara sy ny nijoroan’ny Foloalindahy malagasy amin’ity taona 2019 ity, araka ny fampitam-baovao ataon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena. Hisy ny fandraisan’anjaran’ireo Tafika avy amin’ireo firenena vahiny (La Réunion sy Kaomoro ary Maorisy) mandritra ny matso lehibe izay ho atao eny Mahamasina ny 26 jona 2019. Miaramila iraisam-pirenena maherin’ny 20 no handray anjara amin’izany. Hisongadina ihany koa ny fiatrehan’ny Filoham-pirenen’i Rwanda, Paul Kagame, izay firenena anisan’ny mandroso ankehitriny aty amin’ny faritry Afrika na dia nandalo fahasahiranana aza nandritra ny taona maro.
vendredi, 21 juin 2019 11:01
Toamasina: Nanjanona ny « Marche de l'indépendance »
Natao teo amin’ny Araben'ny fahaleovantena androany maraina teo ny « Marche de l'indépendance » saingy najanona fa avy ny orana. Mbola baraingo ihany koa ny « bal populaire » sy « podium » tokony hatao manoloana ny Shoprite hanomboka rahampitso, raha mitohy ny orana.
vendredi, 21 juin 2019 11:00
Rinah Rakotomanga: "Izay tsy faly mahazo manjifa amin'ny sarany teo aloha"
Eo anatrehan'ny resaka fampidinana ny vidi-tsolika, dia naneho hevitra, tao amin'ny pejiny facebook, ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, ramatoa Rinah Rakotomanga: "Nihena 500 ar ny solitany, nihena 150ar ny GasOil,nihena 100ar ny lasantsy,...ireo izay tsy faly mahazo manjifa @ sarany teo aloha". (Sary nindramina pejy FB Rinah Rakotomanga)
vendredi, 21 juin 2019 09:51
Sambava: Tsy nisy solika tampoka teny amin’ireo toby mpaninjara
Nisavorovoro teny amin’ireo toby mpaninjara teto an-drenivohitry ny Faritra SAVA omaly alakamisy 20 jona. Efa niely tamin’ny haino aman-jery sy tamin’ny tambazotran-tserasera ny fihenan’ny vidin-tsolika eto Madagasikara, tsy izay anefa fa mbola vidin-tsolika teo aloha no novantanin’ny mpanjifa teny amin’ireo toby mpaninjara. Ireo mpitatitra no nimenomenona. Rehefa naresaka ny fitakiana ka nanomboka tangorongorona teny amin’ny toby mpaninjara, dia tampoka teo nambara fa tsy misy intsony ny solika eto Sambava.
vendredi, 21 juin 2019 09:35
Bianco: Nahazo trano vaovao, hotokanana anio
Ry zareo Japoney no namatsy vola nanamboarana ny trano vaovao ho an’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco, miorina eny Ambohibao-Ambohidratrimo misy ny foiben-toerany. Vita ny trano ary hotokanana anio zoma 21 jona. Hamantana an’ity fotodrafitrasa vaovao ity ny Tale jeneralin’ny Bianco vaovao, hisolo toerana an’i Andriamifidy Jean Louis. Dimy taona tsy azo havaozina ny fe-potoana iasan’ny Tale jeneralin’ny Bianco.
Fetim-pirenena: Hiverina indray ny Kermesin’ny Tafika
Rehefa niato taona vitsivitsy, dia hiverina indray ny Kermesin’ny Tafika. Hanomboka rahampitso eny amin’ny Kianjan’i Betongolo – Antananarivo izany, hahitana kilalao sy fialamboly isan-karazany ho an’ny rehetra.
jeudi, 20 juin 2019 13:24
Fandriampahalemana: Tapitra ny famindram-po
Tapitra anio 20 jona 2019 ny fe-potoana famindram-po ho an’ireo izay nitazona basy tsy ara-dalàna tany aminy, ka tsy namerina izany teny amin’ny mpitandro ny filaminana. Mihatra ny lalàna aorian’ity 20 jona ity.
Fetim-pirenana: Hisy “Bal populaire” eo Analakely-Antananarivo
Hiverina indray ny “Bal populaire”, ary tafiditra amin’ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantena sady fetin’ny Foloalindahy Malagasy rahateo. Aorian’ny Afomanga izay haharitra 45 minitra etsy Anosy, ny harivan’ny 25 jona 2019 dia hitohy amin’ny lanonam-bahoaka na “Bal populaire”, eo amin’ny Kianja Ralaimongo, Analakely ny fety.
Page 11 sur 447